CURASHADA BISHA MOWLIID IYO DIYAARGAROWGA MUSLIMIINTA EE MUNAASABADAAS AADKA UWAYN :
Sida aad la socotaanba waxaan lugaha lagalnay maalmihii hore ee bisha barakaysan ee Rabiicul awal oo ah bisha sedexaad ee hijriga 1431 H , bishan 12 keeda waxaa dhashay nabigeennii suubanaa NNKH .
Marka laga soo tago malaayiin muslimiin ah oo maalmahaan Internetka iyo SMS yada isku marinaya Hanbalyadaas ayaa hadana waxaa geesteeda kale socota in Munaasabado aad u balaaran ay diyaarinayaan islaamku meel walba oo uu joogo .
Marka hore aan si kooban u sharaxno Afafka kala duwan ee bishan ay u kalayaqaanaan dadka Muslimiintu :
Dalkeenna hooyo ee soomaaliya waxaa looga yaqaan MOWLIID
Dalalka luqada carbeed looga hadlo waxay u yaqaanaan : Eid al-Mawlid an-Nabawī .
Dalalka ku yaalla galbeedka africa sida Sinigal , Gambia , murutania waxay u yaqanaan mowliidka Gamou oo ah luqada WOLOF-ka ladhaho oo ay ku hadlaan dalalkaasi .
Dalalka Bariga Africa waxay dhahaan ayaguna Maulidi.
Dalalka Indonesia iyo malaysia waxyar ayey isku dhowyihiin waxyna kala dhahaan Maulid Nabi iyo Maulud Nabi
Hadaanu eegno dalalka Pakistan , India , Bangladesh waxay yiraahdaan Barawafat
Dalalka carbeed waxaa qaar looga yaqaan Yawm an-Nabī oo ah maalintii nabiga SCW
Dalka Turkiga waxaa looga yaqaan Mevlid Şerif .
Dalalbadan oo Ashiya kuyaal waxaa looga yaqaan Mawlūd Sharīf.
Hadaba ayada oo aan lasoo koobi karin Magacyada ay u yaqaanaan umad waynaha islaamka ee jinsiyadaha kala duwan ayaa hadana waxa ay magacyadani yihiin badankoodu kuwa la fahmi karo oo uu kubadanyahay ereyga MOWLIID oo ah dhalasho waana dhalasho oo ah dhalashada ugu kheerka badneed ee suubanaheenna SCW .
Dadka muslimiinta ayaa munaasabadahan siyaabo kala duwan u dhiga , dalalbadan oo aan ka xusi karno somalia , kenya, uganda , algeria , Sudan , yaman , syria , libiya , dalal badan oo ashiya ku yaal iyo kuwa carbeed , ayaa ayagu waxa ayba hore u bilaabeen dabaaldaga bishan ayagoo wadaya ilaa 30 maalmood ee bishan , habeen walbana ka sheekeynaya dhalashadii nabiga SCW sida uu dhulku isku badalay iyo ayagoo ka sheekeynaya siirada nabiga SCW , waxaan halkaasi laga aqriyaa nabi amaanno luqado kala duwan lagu qaadayo .
Dalalka qaar ayaa lasheegaa in ayba 3 bilood wadaan dabaaldagga bishan barakaysan ee rabiicul awwal oo ah bishii aduunka lakeeney qofkii ugu kheerka badnaa oo ah nabigenna muaxammed ah NNKH .
Waxaa dalaka qaar ay ku xardhaan wadooyinka waaweyn muuqaallo iyo ereyo iyo aayado quran oo ka hadlaya in uu nabiga SCW uu nuur ama iftiin u ahaa khalqiga oo dhan , wadamada sida gaarka ah loogu yaqaan waxaa kamid ah Libya oo madaxweynaha dalkaasi ol.Mucammar al-qadafi uu malaayiin dollar ku bixiyo munaasabadaha mowliidka, madax farabadan oo muslimiinta ah iyo mashaaikh diinta islaamka aad loogu qadariyo uu ku casuumo ixtifaalka nabiga Scw.
Hadaba Soomalaida hadaan jaleecno waxa ay wadaan abaabullo balaaran oo dalal farabadan ay kawadaan iyo gudaha dalka soomaaliya ,Ardayda jaaamacadaha ee sudan,yaman, masar,malaysia , ukrain oo ah meelaha ugu badan ee ardayda soomaaliyeed wax ka bartaan .
Dalka maraykanka waxa ka dhacaya goboladiisa iyo magaalooyinkiisa munaasabadan balaaran ayadoo marka ugu danbaysana layskugu imaandoono magalaada columbus ee gobolka ohio ayadoo wufuud culumo ah oo soomaaliyeedna ay kusii qulqulayaan halkaasi .
Isku soo wadaduuboo bishaan mowliid waxa hanbalyooyinka laysku diraya kamid ah gaar ahaan kuwa soomaaliyeed erayga ah MOWLIID MUBAARAK , waxayna culumaaudiinka soomaaliyeed ilaahay uga baryayaan in fadliga bishan in uu ilaahay soomalaiya dhibaatada uga qaado naacoow nabadeedna ugu badalo .
Hadaanu nahay saxafiyiinta soomaaliyeed ee caalamka kusugan waxaan hanbalyo tan lamid ah u direynaa muslimiinta meel walba oo ay dunida dacaladeeda ka joogaan .
Akhristayaasha sharafta badan waxaan idiin balanqadeynaa inaan si talantaaliya idiinku soo gudbinno munaasabadaha mowliidka ee ka dhici doonna dalalka caalamka haddii alaha awooda lahi ogolaado .